Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Itari » Maitiro ekumisa Ngozi yeBerlusconi's Candidacy muItari
Mufananidzo nerubatsiro rwaMathieu Cugnot, Musiki, © European Union 2019
Bato rese repakati-kurudyi rezvematongerwo enyika rinoomerera zviri pamutemo pakudoma Silvio Berlusconi kuQuirinale. Iyi pachezvayo inyaya yakakomba, inofanirwa kubatwa seyakadaro, kupfuura hunyanzvi kana kurwisana.
Silvio Berlusconi muItaly media tycoon uye wezvematongerwo enyika akashanda se Mutungamiriri weItaly muhurumende ina kubva 1994-1995, 2001-2006, uye 2008-2011. Nemashandisiro aakaita masangano nesimba rake, Berlusconi aive mutungamiri wezvematongerwo enyika akanyanya kuisa mungozi hutongi hwejekerere, mushure maDonald Trump, kuMadokero. Uye akatyora zvimiro zvayo, anonyora Emanuele Felice, mutori wenhau paDomani yemazuva ese.
Dai akasarudzwa nhasi, akasarudzwa nekuti akagadzwa korona nevatungamiriri vaviri vakaita saSalvini naMeloni avo vanotaura pachena nezvehutongi hwejekerere hwaOrban, Putin naTrump. Mhedzisiro yakadai ingave inonyadzisa kuItaly Republic, nekuda kwetsika nezvematongerwo enyika uye nezvikonzero zvekutonga. Zvingaratidza kudonha kwenzvimbo yedu yepamusoro uye yakakosha zvakanyanya, kubva pachivharo chevimbiso kuenda kune chimwe chinhu chinogona kuitika munyika yedu, akadaro Felice.
Iye zvino, kuti ubate zviratidzo zvakatenderedza, zvinoita sekunge chiitiko chisingaite. Iyo yekumberi creaks, pane musiyano, chiratidzo chekuti nhamba dzakaoma. Asi zvisinei neizvi, vanobatana vanoramba vachimutsigira zviri pamutemo, uyezve nekuzvidza kumwe kunyomba (vanokumbira Berlusconi kuti "aparadze chengetedzo yakaitwa kusvika zvino" mushure memusangano kumba kwake).
Icho ichokwadi chinotaura zvakawanda nezve hunhu hwepakati-kurudyi hwatinahwo muItari. Anowedzera zvisimbiso pahunhu hwevatungamiriri vakaita saMatteo Salvini naGiorgia Meloni. Mukuwedzera kuna Berlusconi pachake, wekutanga anofanira kuziva mamiriro acho ezvinhu uye panzvimbo pacho ari kumanikidzira nyika kumuedzo uyu unonyadzisa uye une ngozi, kwatiri isu tose, pamberi penyika yose - uye munguva yakadaro.
Itari yepakati-kurudyi nokudaro inosimbisa kuti haina hutsinye, inoshamisira, uye haina basa.
Senge pasina imwe nyika muWestern Europe (zvichida kuenzanisa chete kuchiripo ndekweUnited States, uko maRepublican ari nhapwa kuna Trump).
Pakati-kuruboshwe kunofanirwa kudzivirira kukanganisa kunouraya. Bvisa Berlusconi uye uvhotere rimwe zita repakati-kurudyi, risiri "kuparadzanisa." Mhedzisiro yakadai ingangove kukunda kweBerlusconi uye kune vese vepakati-kurudyi, iyi yepakati-kurudyi. Zvingareva kubvuma mukana weBerlusconi senzvimbo yekutanga yenhaurirano.
Pd naCinque Stelle vanofanirawo kudzivirira kukanganisa kwakapesana uye kudzika midzi mukutsamwa. Zvichida kurudzira mumiriri wemureza, nokudaro vachitsigira pfungwa yeItaly yakakamurwa kuita maviri umo bato rega rega, shure kwezvose, rine kodzero yekuve pamutemo uye kuenda kunokonana nenjodzi yekurasikirwa.
Izvo zvinofanirwa kuita nekutarisa pane chimiro chepamusoro-soro, chisingabvi kune rimwe remativi maviri uye uyo, nokudaro, anokwanisa kupinda mukati kunyangwe pakati pevavhoti vepakati-kurudyi vakavhiringidzika. Ndiye munhu anokwanisa kukunda pasina kubvuma nhaurirano nevaya vanoisa pangozi masangano edu epamusoro asi pasina kuzvipira pachake mukupupura.
Chiziviso cheMunyori: Tsika yevazhinji vezvematongerwo enyika uye vezvenhau pana Mr. Berlusconi inosarura kuve yakaipa.
Chinyorwa ichi ipfungwa nemunyori.
Dzimwe nhau pamusoro peItaly
Europe Itari Western Europe